I-Cycloastragenol powder (78574-94-4) - I-Shangke Chemical
I-cycloastragenol powder (78574-94-4)
I-cycloastragenol sisixhobo esikhoyo sokuchasana nokwaluphala sokutya nesongezo esimalunga nentengiso.
I-cycloastragenol powder (78574-94-4) ividiyo
ICycloastragenol powder Suqobo
Igama lemveliso I-cycloastragenol powder
Iintetho ezifanayo astramembrangenin
Inani leCAS 78574-94-4
I molecular Fi-ormula C30H50O5
I molecular WSibhozo 490.7 g / mol
IMasaisotopic Mass 490.365825 g / mol
Sukufaneleka I-DMSO: 10 mg / mL, icacile
Aukuguquka I-cycloastragenol yinto esebenzayo ye-telomerase. Kwakhona, inokudityaniswa ngokuchaseneyo nokwaluphala kumayeza e-chinese yesiqhelo.
I-cycloastragenol sisixhobo esikhoyo sokuchasana nokwaluphala sokutya nesongezo esimalunga nentengiso. Ikwasetyenziswa kwi-skincare ye-skincare kunye neefomula zezithambiso. I-cycloastragenol yaqala ukuthengiswa kwi-supplements yokutya e-USA ngo-2007 phantsi kwegama le-TA-65, yiyo loo nto i-TA 65 okanye i-TA65 iseyeyonagama iqhelekileyo le cycloastragenol.
ICycloastragenol yimolekyuli ethathwe kwi-Astragalus membranaceus herb. I-Astragalus herb isetyenzisiwe kumayeza aseTshayina kangangeenkulungwane. AmaTshayina amabango athi i-Astragalus inokuqhubeka nobomi kwaye ibisetyenziselwe ukunyanga ukukhathala, i-allergies, ukubanda, isifo sentliziyo kunye neswekile.
I-cycloastragenol yenye yezithako ezisebenzayo kwi-Astragalus. I-cycloastragenol inesimo esifanayo seekhemikhali kule molekyuli ye-Astragaloside IV, kodwa incinci kwaye iphawuleka ngakumbi, kwaye yenza ukuba idosi ezisezantsi zithathwe. Sele isetyenziswa njenge-immunostimulant ngenxa yesakhono sayo sokonyusa ukubonakaliswa kwe-T lymphocyte. Nangona kunjalo, zizinto zayo ezichaseneyo zokwaluphala ezinomdla onomdla kuluntu lwezenzululwazi.
I-cycloastragenol ikhuthaza ulungiso lomonakalo we-DNA ngokwenza iseti ye-telomerase, i-enzyme ye-nucleoprotein efaka uxinzelelo kunye nokukhula kwe-telomeric DNA. Iifelomeres zenziwe ngeefiliments ezincinci kwaye zifumaneka kwiingcebiso zee chromosomes. Ukugcina uzinzo lwazo kwenza iiseli ukuba ziphephe ukuphindaphinda kunye nokuhluma okungapheliyo ngaphaya komda 'weHayflick'. I-Telomeres zinqumleza ngomjikelo ngamnye wokwahlula iiseli, okanye xa uphantsi koxinzelelo lwe-oxidative. Ukuza kuthi ga ngoku, le ibiyindlela engenakuphepheka yokwaluphala.
Iindlela zentshukumo ICycloastragenol
Inani elikhulu lezifundo libonisile ukuba ukunqunyulwa okuqhubekayo kwe-telomeres kunxulunyaniswa kakhulu nezifo ezinxulumene nobudala (isifo sentliziyo, usuleleko, njl njl) kwaye kusengaphambili ngokufa ngaphambi kwexesha kwizifundo zabantu abadala. I-Telomeres zinqumleza ngomjikelo ngamnye wokwahlula iiseli, okanye xa uphantsi koxinzelelo lwe-oxidative. Ukuza kuthi ga ngoku, le ibiyindlela engenakuphepheka yokwaluphala.
I-Telomerase yi-enzyme ye-nucleoprotein efaka uxinzelelo kunye nokukhula kwe-telomeric ye-DNA kunye nokukhuthaza ukulungiswa komonakalo we-DNA.
I-cycloastragenol isebenze kwaye ivuselele i-enzyme, ngaloo ndlela inciphisa ukufinyezwa kwee-telomeres kunye nokwandisa amanani abo. Ngale ndlela, ivumela ukwandiswa kwee-telomeres kwaye ngenxa yoko, yandisa ixesha lokuphila leseli.
Ngenxa yesisindo sayo esisezantsi semolekyuli, uCycloastragenol udlula ngokulula kudonga lwamathumbu. Ukuqiniswa ngokufanelekileyo kukuvumela ukusebenza ngempumelelo okuphezulu, nokuba kukwidosi ephantsi. Ukuhanjiswa kwansuku zonke nokuba kukodwa, okanye ukudityaniswa okanye kukunye, i-astragaloside IV, kuyanceda ukubamba ukuguga kwaye kwandise iminyaka yobomi.
I-Astragalus membranaceus iphakathi kwamayeza axabisekileyo kwimbali yamayeza esiTshayina esiqhelekileyo njengonyango lwamayeza ukunyanga ukukhathala, ukugula, izilonda, umhlaza, umkhuhlane, ukubulala umva, ukubangaba ixesha elide njl. Njl. Nangona kunjalo, izibonelelo eziphambili ze-cycloastragenol powder zinje ngokuchasene nokwaluphala kunye neziphumo zenkxaso yomzimba.
ICycloastragenol kunye nenkxaso yomzimba
I-cycloastragenol inokusetyenziselwa ukukhusela amajoni omzimba, i-antibacterial, kunye ne-antiinfigueatory, ukuthintela ukubanda okuqhelekileyo kunye nosulelo lwenkqubo yokuphefumla ephezulu. Isetyenziswe njengesixhobo sokuphucula amajoni ngenxa yokuba nako ukonyusa ukukhula kwe-T lymphocyte. Nangona kunjalo, oko uluntu lwezenzululwazi luye ngakumbi ekubeni nomdla ngakumbi kukuxhathisa kwayo ngokuguga. I-cycloastragenol ikhuthaza iDNA ukuba ilungise umonakalo ngokuqala i-telomerase kwaye ivumele iprotechnate yenyukliya ukuba ivuselele kunye nokukhula kwe-telomere DNA.
ICycloastragenol kunye nokulwa nokwaluphala
Ukuchasana nokwaluphala sisibonelelo esibonakalayo se-cycloastragenol. I-cycloastragenol ayilibazisi nje ukuguga kwabantu, kodwa yongeza amandla angakhuselekanga, ukuphepha ubuthi, ukukhusela iiseli zentliziyo, ikakhulu ezithathwe kwi-hydragaloside (Astragaloside Ⅳ) hydrolysis.
Ezinye izibonelelo zeCycloastragenol
i-cycloastragenol powder inefuthe ekunciphiseni uxinzelelo nokukhusela umzimba ngokuchaseneyo noxinzelelo, kubandakanya uxinzelelo lomzimba, lwengqondo, okanye lweemvakalelo;
i-cycloastragenol powder iqulethe ii-antioxidants, ezikhusela iiseli kumonakalo obangelwa ziidrafiki zasimahla;
I-cycloastragenol powder inefuthe ekunciphiseni uxinzelelo lwegazi, ukunyanga isifo seswekile kunye nokukhusela isibindi.
ICycloastragenol iziphumo ebezingalunganga zomgubo
Ukuza kuthi ga ngoku, akukho ngxelo okanye uphononongo lwesiphumo esibi okanye ukophula umthetho uthatha ukongezwa kwe-cycloastragenol.
ICycloastragenol yongeza idosi
I-cycloastragenol intsha ngokuthelekisa kwaye ayizizo izinto ezininzi zokuxhasa ezentengiso, kwaye akukho dosi icetyiswayo ekhoyo. Ngokwamava ethu, umthamo uhluka ngeenjongo ezahlukeneyo, iminyaka. Ngokuqinisekileyo i-cycloastragenol inamandla kakhulu kune-Astragaloside IV ene-idosi yayo ekhuthazwayo eyi-50mg ngosuku. Ngelixa i-cycloastragenol, idosa ukusuka kwi-10mg ukuya kwi-50mg yonke ilungile. Isidingo esidala sokuthatha ngaphezulu kwabantu abadala abaphakathi. Abanye bacebisa ukuqala nge-5mg ngemini, kwaye ke ukongeza kancinci kancinci. Kuba i-cycloastragenol sisicoci sendalo, inokuthatha ixesha ukubona iziphumo, malunga neenyanga ezintandathu.
I-cycloastragenol iye yaziswa ngabathile njenge-arhente yokulwa ukuguga. Izifundo zakuqala zibonakala zithembisa, zibonisa ukuba inakho ukonyusa ubude be-telomere, nangona kunjalo kusekho ukusilela kohlolisiso olusemva koontanga. Ukongeza, kukho inkxalabo ethile yokuba ukuthatha i-Cycloastragenol kunganyusa umngcipheko wokuba nesifo somhlaza. Nangona kunjalo, izifundo zophando azikwazanga ukufumanisa nayiphi na ingozi yomhlaza ehambelana nokusetyenziswa kweCycloastragenol.
I-cycloastragenol ijongeka ngathi yicandelo elithembisayo lokuguga. Ngelixa kungangqiniswanga ukuba inyusa ixesha lobomi kodwa ibonakalisiwe ukunciphisa iminyaka eyahlukeneyo enxulumene neebhomomark. Ukongeza kubonisiwe ukunciphisa iimpawu zokuguga ezinje ngemigca emihle kunye nemibimbi. Isenokwehlisa umngcipheko wezifo eziwohlokayo njenge-Alzheimer's, Parkinson's, retinopathies, kunye nekati.
ICycloastragenol Ukusetyenziswa komgubo kunye nokusetyenziswa
I-cycloastragenol isetyenziselwa unyango, ukulawula, ukuthintela kunye nokuphucula kwezi zifo zilandelayo, iimeko kunye neempawu:
I-cycloastragenol inokusetyenziselwa iinjongo ezingadweliswanga apha.
Ubungakanani be-cycloastragenol powder isetyenzisiwe ngezantsi komhlaba:
Ifakwe kwicandelo lokutya, ihlala isetyenziswa njengezongezo zokutya;
Ifakwe kwintsimi yemveliso yezempilo, le ncindi iluncedo emzimbeni womntu;
Ifakwe kwintsimi ye-cosmetic, njengohlobo lwezixhobo eziluhlaza, inokuxuba izimonyo zendalo.
Izinto zokuthintela ukwaluphala kwe-cycloastragenol eziveliswe yi-biotransformation.Chen C, Ni Y, Jiang B, Yan S, Xu B, Fan B, Huang H, Chen G.Nat Prod Res. 2019 Sep 9: 1-6. doi: 1080 / 14786419.2019.1662011.
ICycloastragenol: Umgqatswa wenoveli onomdla kwizifo ezinxulumene nobudala.Yu Y et al. I-Ther Med. (2018) Izinto zokuthintela ukwaluphala kwe-cycloastragenol eveliswe yi-biotransformation. I-Chen C, Ni Y, Jiang B, Yan S, Xu B, fan B, Huang H, Chen G. Nat Prod Res. 2019 Sep 9: 1-6. doi: 10.1080 / 14786419.2019.1662011
I-cycloastragenol iyakwazi ukwenza ukuba i-STAT3 isebenze kwaye ikhuthaze ukwenziwa kwe-paclitaxel kwi-cell yesifo somhlaza esiswini.Hwang ST, Kim C, Lee JH, Chinnathambi A, Alharbi SA, Shair OHM, Sethi G, Ahn KS. Ngo-2019 Jun
I-Astragaloside VI kunye ne-cycloastragenol-6-O-beta-D-glucoside ikhuthaza ukuphiliswa kwenxeba kwi-vitro nakwi-vivo.Lee SY et al. I-Phytomedicine. (2018)